Arivonimamo :: Telo mianaka tratra nanodinkodina zaza tsy ampy taona • AoRaha
Arivonimamo Telo mianaka tratra nanodinkodina zaza tsy ampy taona
Nentin’ny polisy natao famotorana ny lehilahy iray, dimy amby roapolo taona, sy ny ray aman-dreniny mipetraka any Miadamanjaka Arivonimamo, afak’omaly. Voarohirohy tamin’ny fanodikondinana zazavavy iray tsy ampy taona izy telo mianaka ireo.
Natolotra ny Fampanoavana, omaly, ireto fianakaviana kely ireto. Voatazona am-ponja vonjimaika ilay tovolahy. Nahazo fahafahana vonjimaika ny ray aman-dreniny.
Tsy hita popoka tao amin’ny akany fitaizana zaza kamboty sy zaza tsy ampy taona any Arivonimamo, izay nipetrahany, ny ankizivavy iray, enina ambin’ny folo taona. Nametraka fitoriana teny amin’ny polisy momba io fahaverezana io ny tompon’andraikitra tao amin’ny akany. Natao ny fanadihadiana sy ny angom-baovao rehetra. Fantatra fa tovolahy iray no mitondra sy mampiantrano azy. Tratra tao an-tranon’ny olona telo mianaka tany Miadamanjaka Arivonimamo ilay ankizivavy.
«Sakaizan’ny tovolahy, 25 taona, ilay ankizivavy. Voalaza fa tsy vao sambany no tsy nahitana an’io zazavavy io sy ny nivoahany tao amin’ny akany. Nisy fotoana izy mipetraka efatra andro na herinandro any amin’ilay tovolahy sakaizany. Mahafantatra tsara momba azy anefa ilay tovolahy sy ny ray aman-drenin’itsy farany, toy ny hoe ankizy tsy ampy taona sy ny fitaizana azy any amin’ny akany. Tsy nisy akory ny fierana nataon’izy ireo momba ny fitazonana an’ilay zaza tsy ampy taona», araka ny fanampim-panazavana avy amin’ny mpitandro ny filaminana.
Asa ratsy eny an-dalambe :: Mpanendaka mody mamo avy eo misavika fiara